Ogaden News Agency (ONA) – Nin Somali Ah oo Weerar Ka Gaystay Badhtamaha Magaalada London.
Nin Somali Ah oo Weerar Ka Gaystay Badhtamaha Magaalada London.
Sida ay sheegayso warbaahinta dalka Britain nin Somali ah ayaa laxidhay iyadoo lagu tuhunsan yahay inuu dilay qof dumar ah shan kalena uu dhaawacay, kadib weerar mindi ah oo ka dhacay meesha lagu magacaabo Russell Square oo ku taala badhtamaha magaalada London.
Ciidanka Nabadsugida ayaa goobtii weerarku ka dhacay yimid iyadoo lagu wargaliyay in nin uu dhaawacay dad, oo ay ku jirto hal qof oo haween ah oo 60-jir ah oo dhimatay. Wiil sagaal iyo toban jir ah ayaa laxidhay. Boliiska ayaa sheegay ninkan laqabtay inuu Soomaali yahay kayimid dalka Norway oo caafimaadka maskaxdiisa ay sabab wayn u tahay inuu weerarkan gaysto.
Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa dadka ugu baaqay deganaan iyo taxadar. Laba qof oo kale oo dumar ah iyo saddex nin ayaa waxaa kasoo gaadhay dhaawacyo kala duwan. Laba kamid ah dadka dhaawacmay ayaa ku jira isbitaalka, halka saddex qof ay isbitaalka laga bixiyay sida uu boliisku sheegay.
Ninkan weerarka gaystay ayaa laga daaweeyay dhaawacii soo gaadhay, kadibna loo wareejiyay saldhiga boliiska. Gudoomiye ku xigeenka boliiska ee hawlgalada gaarka ah, Mark Rowley, ayaa sheegay in qaybta boliiska ee qaabilsan dilka ay hogaaminayso baadhitaanka weerarkan, iyadoo taageero ay ka helayso qaybta ka hortaga argagixisada.
Paul O Geibheannaigh, oo degan goobta weerarku ka dhacay agteeda, ayaa sheegay inuu arkay maydka qofka dumarka ah oo jidka yaala, goobtana ay joogeen boliis badan oo hubaysan ” Ma aanan arag boliis sidan u badan oo jooga goobta tan iyo 7/7, ayuu intaas raaciyay, isagoo ka wada weerakii argagixiso ee London lagu qaaday July 2005-kii. Isagoo ka hadlaya sababta weerarka, boliiska ayaa sheegay in baadhitaankooda la eegi doono argagixiso inay ka mid tahay sababta weerarkan ka dambaysay iyo inkale.